Ọ dị mma ịzụta n'aka Yaphone? | Androidsis
Ignacio Sala | 11/10/2021 18:00 | Mobiles, Nyocha
Site na ịntanetị, anyị nwere ike nweta ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na -enye anyị ohere ịtụle ọnụ ahịa ngwaahịa ndị anyị na -eme atụmatụ ịzụta na nke na -anọchite anya nnukwu ego itinye ego. Otu n'ime ha bụ Amazon, agbanyeghị, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị ọnụ ala ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị dị iche iche.
A bịa n'ịzụta ekwentị mkpanaaka, na mgbakwunye Amazon, anyị nwekwara Yaphone anyị, otu n'ime weebụsaịtị ama ama iji zụta ekwentị mkpanaka, ekweisi, smartwatches sitere na ndị na-ere ahịa kachasị dị ka Samsung, Apple, Vivo, Xiaomi, Oppo, Nokia, Realme, Huawei, Asus… Agbanyeghị, ajụjụ dị mkpa bụ Ọ dị mma ịzụta n'aka Yaphone?
1 Kedu ihe kpatara igwe ekwentị Yaphone ji dị ọnụ ala?
2 Oge mbupu nke ngwaahịa
3 Ụzọ ịkwụ ụgwọ Yaphone
4 Kedu maka akwụkwọ ikike?
5 Enwere m ike iweghachite ngwaahịa?
6 Nyocha Yaphone
7 Ọ dị mma ịzụta n'aka Yaphone?
Kedu ihe kpatara igwe ekwentị Yaphone ji dị ọnụ ala?
Na Spain, ndị nrụpụta niile na -etinye a 21% VAT na ngwaahịa elektrọnik niile. Ruo n'oge na -adịbeghị anya, ịzụrụ n'ụlọ ahịa Eshia dịka AliExpress, Gearbest na ndị ọzọ dị ọnụ ala maka nkwekọrịta azụmaahịa na China nke na -etinyeghị VAT Spanish mgbe ọ na -ezipụ ngwaahịa na Spain.
Nke ahụ gbanwere n'etiti afọ 2021, yabụ taa, belụsọ na ịzụrụ ngwaahịa China, ọ baghị uru ịzụta ruo ugbu a, ọ bụghị naanị n'ihi ọdịiche ọnụahịa kacha nta, kamakwa nsogbu ndị anyị na -eche ihu mgbe anyị na -eji nkwa ahụ.
Dị ka anyị nwere ike ịhụ na webụsaịtị ha, Yaphone dabere na isi Andorra. Ụtụ isi na Andorra pere mpe karịa na Spain nwere VAT kachasị nke 4,5% yana ụtụ isi ego kacha elu nke 10%, ya mere ọtụtụ mmadụ, na mberede ndị na -enweta ego kachasị, na -aga Andorra ịkwụ ụtụ isi.
N'ihi na ọnụahịa kacha nke VAT ha na -etinye na ngwaahịa ha bụ 4,5%, ụtụ ha ga -etinye dị ala karịa nke anyị nwere na Spain, nke a na -enye gị ohere. na -enye ngwaahịa ha n'ọnụ ọnụ ala karịa nke Spain.
Oge mbupu nke ngwaahịa
Yaphone anaghị etinye ụgwọ mbupu ọ bụla na ngwaahịa niile ezigara na peninshula na agwaetiti Balearic site na ụlọ ọrụ na -ebugharị NACEX.
Ọ na -ebugakwa ngwaahịa ya na mba ndị ọzọ dị na Europe na ọnụ ahịa nke ahụ bụ 8,95 euros (Germany, Belgium, France, Holland, Italy na Luxembourg) ihe ruru euro 28,50 (Austria, Bulgaria, Denmark, Slovakia, Greece, Hungary…). Enweghị mbupu a na -ebuga na United Kingdom.
Oge mbupu nke ngwaọrụ ndị dị na Yaphone dịgasị dabere ma ha nwere ihe nlereanya dị na ngwaahịa ma ọ bụ ọ bụrụ na ha ga -atụrịrị ya. Ọ bụrụ na ọ bụ ngwaahịa dị na ngwaahịa (egosiri na nkọwa ihe), nyere iwu ụgbọ mmiri n'ime awa 24.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ha ga -atụ ngwaahịa, oge nnyefe nwere ike ịdị iche n'etiti 3 na 10 ụbọchị.
Ụzọ ịkwụ ụgwọ Yaphone
Yaphone na -enye anyị ụzọ atọ ịkwụ ụgwọ, na nke anyị anaghị ahụ PayPal.
Ịkwụ ụgwọ na nkeji na ọnwa 3, 6, 12 ma ọ bụ 18 nke Sequra kwadoro.
Ego na nnyefe mgbe onye na -ere ahịa Nacex na -ewepụta ngwaahịa a.
Nhọrọ ikpeazụ a bụ ihe kacha mma ma ọ bụrụ na ị zụtabeghị na webụsaịtị a ma ị tụkwasịghị ya obi.
Ngwaahịa niile nke Yaphone na-ere nwere nkwa afọ 2, dịka ọ bụrụ na ịzụtara ya na obodo ọ bụla nke European Union. The nkwa na -ekpuchi ntụpọ na nrụpụta nrụpụta yana na -akpọ anyị oku ka anyị kpọtụrụ onye nrụpụta ka ọ hazie akwụkwọ ikike ahụ.
Ozugbo anyị nwetara iwu ahụ, Yaphone na -enye anyị oge kachasị nke awa 24 ka ọ bụrụ ka anyị lelee na emebighị ya n'oge njem. Yaphone na -enyocha ngwaahịa niile ọ na -eziga, yabụ ọ bụrụ na ọ mebiri emebi n'oge njem, anyị ekwesịghị inwe nsogbu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịnwe nsogbu na ngwaọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga -anakọta ọnụ n'efu n'ụlọ onye ahịa wee ziga ya na ọrụ nka pụrụ iche (akọwapụtaghị ya na usoro ojiji) na ọ bụ nkwado aka ọrụ nke onye nrụpụta). Usoro a na -ewe n'etiti ụbọchị 25 ruo 30.
Enwere m ike iweghachite ngwaahịa?
Anyị nwere ụbọchị 14 iji nwalee ngwaahịa a wee chọpụta na ọ bụghị naanị na ọ na -arụ ọrụ mana na ọ dabara na mkpa anyị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị nwere ike weghachite ngwaahịa ahụ na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya, jiri plastik na -echebe na -enweghị iwepụ yana yana ngwa anaghị eji ma ọ bụ megharịa ya n'ụzọ ọ bụla.
Onye ahịa ga -akwụ euro 9,95 maka ụgwọ kagbuo, mmefu metụtara ụgwọ njem na akụrụngwa Yaphone. Yaphone anaghị anabata nloghachi nke smartwatches ma ọ bụ ekweisi maka ịdị ọcha.
Ekwetaghị nloghachi ekweisi maka ebumnuche ịdị ọcha nwere ike ịghọta ruo n'ókè ụfọdụ, agbanyeghị, ịnabataghị nloghachi nke smart smart ka ọ dị m. ebe dị oke njọ na ị kwesịrị iburu n'uche ma ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịzụta nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ndị a na ntọala a.
Yaphone ga -eme nloghachi nke otu site na iji otu ụzọ ịkwụ ụgwọ ejiri mee ịzụrụ ihe oge kachasị nke 14 ụbọchị.
Otu n'ime webụsaịtị nwere ike ịnye anyị ntụkwasị obi kacha ukwuu ma a bịa n'ịma ma ibe weebụ echedoro bụ OCU. Agbanyeghị, ha enweghị yaphone mepere emepe, yabụ oge a anyị enweghị ike ime ya.
En eKomi, webụsaịtị ebe ndị ọrụ nwere ike ikwu maka ntụkwasị obi na ahụmịhe ha na webụsaịtị yana nke ejikọtara na webụsaịtị Yaphone, ụlọ ọrụ a nwere ogo 9 n'ime 10 mgbe ha nwetasịrị ngụkọta nke nyocha 170 n'oge a na -ebipụta edemede a (Ọktoba 2021).
Otu mkpesa sitere n'aka ndị ọrụ ma na eKomi yana na webụsaịtị ndị ọzọ dịka Trustpilot (ya na akara 2,7 n'ime 10 nwere nyocha 10), anyị hụrụ ya n'oge nnyefe, oge mbupu nke mgbe ụfọdụ na -ewe izu.
Mkpesa ọzọ sitere n'aka ndị ọrụ dị na ọrụ ndị ahịa lousy, ma ndị ahịa na -eche ngwaahịa gị, yana maka ndị merela zụrụ ma nwee nsogbu na ngwaọrụ ha.
Onwe ya, ọ na -atụkwasị obi mgbe niile n'ụdị ụlọ ahịa ndị a, ọ bụghị n'ihi na ọnụahịa dị ala karịa ka ọ na -enweghị ezi ihe ọ bụla, nke dị na nke a ebe ọ bụ na ọ bụ ụlọ ahịa dị na Andorra, mana n'ihi nsogbu mgbe ị na -eji nkwa ahụ eme ihe na dịka anyị nwere ike ịhụ na Yaphone ọ bụghịkwa iche.
Ọzọkwa, Yaphone ekwughị na ọrụ ọrụ ọrụ gọọmentị ga -arụzi smartphone ahụ, kama ọ bụ ọrụ pụrụ iche, yabụ enweghị nkwa ọ bụla na ị ga -eji akụkụ mapụtara nke mbụ na nke agbaara agba.
Ngwaọrụ niile dị ọhụrụ ma nwee ọnụ ahịa karịrị akarị, n'agbanyeghị na mgbe ụfọdụ, enweghị nnukwu ọdịiche na Amazon.
Ọ bụrụ na ịtụkwasịghị Yaphone obiỊ nwere ike na -aga Amazon oge niile, na -akwụkwu ntakịrị ma ọ bụ na -eche ka ọ malite otu onyinye dị nso ma ọ bụ hara ọnụahịa ngwaọrụ dị na ụlọ ọrụ a.
Na Amazon anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla mgbe anyị na -ahazi nkwa ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ngwaahịa anaghị ere ere iji gbanwere ya maka nke ọhụrụ, ha ga -eweghachite ego niile ị kwụrụ.
N'uche nke m, ọ bụrụ na ị nwere ohere ịzụta na Amazon, ọ ka mma, ebe ọ bụ na mgbakwunye, ọ na -enyekwa gị ohere ịkwụ ụgwọ ịzụrụ ngwaahịa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ọ dị mma ịzụta n'aka Yaphone?